Muuqaalka Fu’aad Yusuf Cali: “Wuxuusan rabin baa lagu qasbay inuu sheego” | Saxil News Network
Jabuuti (Saxilnews.com)-Qareenka u doodaya duuliye Fu’aad Yuusuf Cali ayaa sheegay in lagu tuntay xuquuqdA dastuuriga ah ee Fu’aad.
Duuliyaha wuxuu ka tirsanaa ciidammada cirka ee dalka Jabuuti kaas oo muddo isbuucyo ah ku xiran dalkaas.
Hadalka garyaqaan Zakariye Cabdullaahi ayaa imaanaya ka dib markii Telefishiinka Qaranka Jabuuti ee RTD, laga baahiyay muuqaal muujinaya xubno ka socda guddiga xaquuqul Insaanka dalkaasi oo xabsiga ku booqday isla markaana wareysanaya duuliye Fu’aad Yuusuf Cali.
Muqaalkaas ayuu Fu’aad ku sheegay in xabsiga aanan wax dhibaato ah loogu geysan, hadalkaa oo ka duwan muuqaal uu horey u soo duubay oo uu ku sheegay in “suuli lagu xiray lana jirdilay.”
Fu’aad wareysiga RTD ay la yeelatay muxuu ka sheegay?
Duuliye Fu’aad Yuusuf Cali oo ku xiran xabsi ku yaallada magaalada Jabuuti waxaa xabsiga ku booqday koox la sheegay iney ka socdaan xuquuqal insaanka Jabuuti, sidoo kalana waxaa maxbuuska wareysi la yeeshay warbaahinta afka dowladda Jabuuti ku hadasha ee RTD.
“Xabsiga marka la i geeyey go’ yar ayaa la i siiyey intaan xabsiga ku jirayna lugaha ayaa i googo’ay, waadna arki kareysaan waxaan u baahanahay dhakhtar maqaar oo jirkeyga eega, la ilama hadlin, reerkeyga inaan la hadlo la iima ooggoleyn oo aan irahdo Gabood baan ku jiraa oo dadkeyga waa i doondoonayaan, taleefan waa la ii diiday”, ayuu ku yiri muuqaalka.
“Waxaan leeyahay nabarro ka dhashay xasaasiyad. Hadda ka hor wey igu dhaceen oo waan ka bogsaday laakiin hadda markaan halkaan soo galay ayey igu soo noqdeen, maamulka xabsiga waan u sheegay oo waxaan ku idhi waxaan u baahanahay dhakhtar… war ilaahey ka baqo oo dhakhtar ii dira ayaan ku dhahay.”
“Laba dhakhtar baa shalay ii yimid; xaaladdeyda oo dhan bey baadheen waxay igu yirahdeen waa in laguu diraa baaritaan dheeraad ah,” ayuu yiri.
“Reerkeyga maysan ii imaan jirin laakiin shalay iyo darraad wey ii yimaaddeen waa la ii oggolaaday, wax jirdil iyo wax dhibaato ah oo la ii geystay malahan, raggu iney ii soo galaane daaye iney ila hadlaan looma oggoleyn intaan xabsiga ku jira ilama hadleynba,” ayuu yiri Duuliye Fu’aad Yuusuf Cali oo u warramay RTD.
Qareenka u doodaya Fu’aad wareysiga RTD muxuu ku qoonsaday?
Garyaqaan Zakariye Cabdullaahi oo la hadlay BBC wuxuu sheegay inuu qoonsaday wareysiga “macmiilkiisa ay RTD kula yeelatay xabsiga taasina ay tahay sharci darro.”
“Ninkaa sharci darrada ku xiran ayaa si sharci darra ah telefishiinka ay dowladdu leedahay uga yirahdeen waxa ay doonaan, ama hadallada ay u dul dhigeen,” ayuu yiri.
Lahaanshaha sawirka FU’AAD YUUSUF CALI
“Wweligeed nin xabsi ku jira oo ay warbaahin wareysato lama arag, qolooyinka xuquuqal insaanka iney tagaan oo ay wax ka qoraan way jiri kartaa – oo qoraal la sameeyo oo la yiraahdo ‘jeelku sidaasaan u aragnay’, dadka dhibaatada haysata waa taa iyo in xaaladda guud looga warramo.”
Sidoo kale Zakariya ayaa yiri: “Meeshan dowladbaa iska xukunto, iyakaa sideey doonaan wax ka yeela, iyagaa sharciga dariiqey doonaan mariya waxaas oo dhan waa wax sharci darra ah oo qareenkiisa aysan u sheegin kuwa sheeganaya iney u shaqeeyaan xuquuqul insaanka dowladda, kuwi la socday iyo RTD Jabuuti, sharci darro ayey sameeyeen wuxuuna odhan beey sheegeen waxay doonaan bey sameeyeen ayna u sheegiin xaaskisi iyo qareenkiisi,” ayuu yiri garyaqaan Zakariye Cabdullaahi.
Qareenka Fu’aad wuxuu ku doodayaa in dowladda aysan weli geynin isbitaal si xaaladdiisa caafimaad loo eego.
“Maanta aad muuqaalka ka arkeyseen jirkiisa dhibaatada ka muuqata marka dowladda Jabuuti, halkii ay RTD iyo kuwan xuquuqda aadanaha sheeganaya ay u geyn lahayd ninkan ha iska sii daayaan,” ayuu yiri.
“Waxyaabaha cajiibka ah ee ay dowladda sameyneyso ayey ku tuseyso; ‘anigu waxaan doonaan sameeynayaa markaan doonaan u tagayaa,’ tan kale xubnahan sheeganaya iney u shaqeeyaan iney xuquuql insaanka dowladda u shaqeeynaya ee mishaarrada ka qaata markay booqanayaan iney ila hadlaan bey ahayd.”
“Haddey tageenna waxay ahayd iney wareystaan oo ay sameeyaan qoraal ay meeshaa kaga hadli karaan, laakiin waxa la geeyay RTD oo dowladdaa leedahay, qoladan dowladda ayay u shaqeeyaan, ninkana wuxuu rabin baa laga sheegsiiyey,” ayuu yiri.
Lahaanshaha sawirka RTD
“Ninka marki uu hadlay ee hore wuxuu sheegay in dhibaatooyin lagu hayo, inuu musqul ku jiro, inuu jiirka la nool yahay, in nolol aan loo oggoleyn, ninki noocaas ahaa in maanta la yirahdo ‘nabarradan seey kugu gaareen? caafimaadkaaga ka warran? ma dhakhtarbaa kuu yimid?’ waa laba wax oo aan islahayn, marka ninkan hadalkiisi hore ayaa sax ahaa.”
“Waxaan oo dhan wa wax la sameyey ninka wax uu yiri ma aha,” ayuu yiri garyaqaan Zakariye Cabdullaahi oo u dooda Duuliye Fu’aad Yuusuf Cali oo dowladda Jabuuti u xiran.
“Anigana waxaan doonayaa xeer ilaaliyaha guud ee Jabuuti inaan arrintan kala xiriiro oo aan u sheego arrinta sida ay u dhacday iyo dhibaatada aqalkiisa, xaaskiisa iyo carruurtiisa lagu hayo oo aan idiin sheegi wuxuu igu yirahdo,” ayuu yiri.
Taariikhda Duuliya Fu’aad Yuusuf oo kooban
Duuliyahan u xiran dowladda Jabuuti wuxuu dhalay toddobo carruur ah oo kala ah shan will iyo laba gabdhood.
Xeer ilaaliyaha Jabuuti oo ka hadlay waxa lagu haysto duuliye Fu’aad